Laba weerar oo maanta ka dhacay Magaalada Istanbul Ee Wadanka Turkiga (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Weeraradan, ayaa siyaabooyin kala gedisan maanta uga dhacay Magaalada Istanbul Ee Wadanka Turkiga, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex ruux, tiro intaasi ka badanna way ku dhaawacantay.
Weerarka hore, ayaa waxaa lagu qaaday Saldhig Boolis, ka dib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay lagu dhuftay Dhismaha Saldhiga.
Ka dib waxaa halkaasi laga maqlay israsaasayn dhex martay Ciidanka Booliska iyo saddex nin oo ku hubeysneyd qoryaha darandooriga u dhaca. Waxaana goobtaasi lagu dilay laba ka mid ah, midkii kalana waxaa loo qaaday goobaha caafimaadka, oo kol dambe uu ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray iska horimaadkaasi.
Weerarka labaad, ayaa waxaa lagu qaaday Qunsiyadda Mareykanka uu ku lee yahay Magaalada Istanbul. Weerarkan ayaa waxaa soo qaaday laba ruux, iyadoona gacanta lagu dhigay haweeney ka mid ahayd labadaasi ruux, xilli uu dhaawac ka soo gaaray iska horimaad dhex maray Booliska.
Dalka Turkiga, ayaa waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay ku soo badanaayay qaraxyada, tan iyo markii uu bilaabay duqeymo ka dhan ah Daacish iyo PKK.
Xukuumadda Ankara, ayaa waxay heegan gelisay laamaheeda amniga, si ay kaga hortaggaan weerarada kaga imaanaaya Ururka Daacish iyo Jabhadda PKK.
Members of a police special forces unit are seen on patrol following an attack on a police station in Istanbul, Turkey, August 10, 2015. REUTERS/Huseyin Aldemir
Members of police special forces unit patrol following an attack on a police station in Istanbul, Turkey, August 10, 2015. REUTERS/Huseyin Aldemir
Police forensic experts examine the scene after an attack on a police station in Istanbul, Turkey, August 10, 2015. REUTERS/Huseyin Aldemir
A plain clothes policeman holds his weapon during investigations after an attack on a police station in Istanbul, Turkey August 10, 2015. REUTERS/Huseyin Aldemir
A boy watches in front of a police barrier after an attack on a police station in Istanbul, Turkey August 10, 2015. REUTERS/Huseyin Aldemir
A Turkish police van is parked at the entrance of the U.S. consulate building after an attack in Istanbul, Turkey, August 10, 2015. REUTERS/Yagiz Karahan
A Turkish police van arrives at the U.S. consulate building after an attack in Istanbul, Turkey, August 10, 2015. REUTERS/Yagiz Karahan